ရှေ့နောက် ပြောင်းပြန် ပြောလို့မရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး | ABC Radio Australia
ရှေ့နောက် ပြောင်းပြန် ပြောလို့မရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး
Lesson7of 14ပြောင်းရန်
ဓာတ်ပုံ - ရိုက်တာ (Credit: Reuters)
‘Life ​​and ​​death’ ​​သေရေး ​​ရှင်ရေး
အစောပိုင်းက ​​ပြောခဲ့သလိုပဲ ​​မြန်မာ ​​ဘာသာမှာ ​​‘သေရေးရှင်ရေး’ ​​ကို ​​‘ရှင်ရေး၊ ​​သေရေး’ ​​လို့ ​​ပြောလေ့ ​​မရှိသလို ​​အင်္ဂလိပ်မှာလည်း ​​‘life ​​and ​​death’ ​​လို့သာ ​​သုံးလေ့ရှိပြီး ​​‘death ​​and ​​life’ ​​ဆိုတာကိုတော့ ​​မသုံးကြပါဘူး။
ဥပမာ- ​​I ​​understand ​​that ​​you ​​are ​​worried ​​about ​​not ​​handing ​​in ​​your ​​assignment ​​on ​​time, ​​but ​​please ​​don’t ​​worry ​​too ​​much, ​​it’s ​​not ​​a ​​matter ​​of ​​life ​​and ​​death. ​​လို့ပြောရင် ​​‘အရည်အချင်း ​​စစ်စာရွက် ​​(စာစီစာကုံး ​​နဲ့ ​​အစီရင်ခံစာ ​​တို့လည်း ​​ဖြစ်နိုင်) ​​ကို ​​အချိန်မှီ ​​မပို့နိုင်တဲ့အပေါ် ​​စိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်ဆိုတာကို ​​နားလည်ပါတယ်။ ​​ဒါပေမဲ့ ​​မပူပါနဲ့ကွာ၊ ​​ဒါက ​​သေရေး ​​ရှင်ရေး ​​ကိစ္စမှ ​​မဟုတ်တာ’ ​​လို့ ​​ပြောခြင်း ​​ဖြစ်ပါတယ်။
‘Trial ​​and ​​error’ ​​အကောင်းဆုံး ​​ရလဒ်ကို ​​မရမခြင်း ​​စမ်းသပ်မှု ​​လုပ်ကြည့်ခြင်း
ဥပမာ ​​- ​​Because ​​he ​​was ​​new ​​to ​​the ​​city, ​​finding ​​the ​​shortest ​​route ​​to ​​work ​​was ​​a ​​matter ​​of ​​trial ​​and ​​error. ​​လို့ပြောရင် ​​‘သူက ​​ဒီမြို့နဲ့ ​​စိမ်းနေတော့ ​​အလုပ်ကို ​​သွားဖို့ ​​အနီးဆုံး ​​ဖြတ်လမ်းက ​​ဘယ်တခုလည်း ​​ဆိုတာကို ​​သွားသွားလာလာ ​​စမ်းလုပ်ကြည့်မှပဲ ​​သိနိုင်တော့မယ်’ ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
‘Lock ​​and ​​key’ ​​လုံခြုံစွာ ​​သိမ်းထားခြင်း
ဥပမာ ​​- ​​I ​​love ​​my ​​new ​​smartphone ​​so ​​much, ​​I ​​keep ​​it ​​under ​​lock ​​and ​​key ​​when ​​I ​​am ​​asleep. ​​လို့ပြောရင် ​​‘ကျမရဲ့ ​​စမတ်ဖုန်း ​​အသစ်လေးကို ​​ကြိုက်လွန်းလို့ ​​အိပ်တဲ့အချိန်ကြရင် ​​သေချာ ​​သိမ်းပြီး ​​အိပ်တယ်’ ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
အရင် ​​တပါတ်တွေတုန်းက ​​ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ​​ရှေ့နောက် ​​ပြောင်းပြန် ​​ပြောလို့မရတဲ့ ​​အင်္ဂလိပ် ​​စကားလုံးတွေကိုလည်း ​​ပြန်လည် ​​မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
‘Bride ​​and ​​groom ​​‘ ​​သတို့သမီး၊ ​​သတို့သား
Bride ​​ကတော့ ​​သတို့သမီး ​​ဖြစ်ပြီး ​​groom ​​ကတော့ ​​သတို့သားဖြစ်ပါတယ်။ ​​မြန်မာမှာ ​​သတို့သား၊ ​​သတို့သမီး ​​လို့ပြောနိုင်ပေမယ့် ​​အင်္ဂလိပ်မှာတော့ ​​groom ​​and ​​bride ​​လို့ ​​ပြောလေ့ပြောထ ​​မရှိပါဘူး။ ​​အမြဲတမ်းလိုလို ​​ပြောလေ့ပြောထ ​​ရှိတာကတော့ ​​bride ​​and ​​groom ​​ပဲ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
‘Back ​​and ​​forth’ ​​သွားလိုက်လာလိုက်၊ ​​ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်
မြန်မာလို ​​ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ကို ​​အင်္ဂလိပ်လို ​​ဘာသာပြန်ရင်တော့ ​​forth ​​and ​​back ​​လို့ ​​ဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့် ​​အင်္ဂလိပ်မှာတော့ ​​forth ​​အရင်လာလေ့မရှိပါဘူး။
နေရာနှစ်ခု ​​အကြားမှာ ​​သွားလိုက်လာလိုက်လုပ်တာ ​​ဒါမှမဟုတ် ​​ရှေ့တိုးလိုက်၊ ​​နောက်ဆုတ်လိုက် ​​လုပ်တာကို ​​back ​​and ​​forth ​​ဆိုပြီးတော့သာ ​​သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ ​​- ​​The ​​children ​​went ​​back ​​and ​​forth ​​from ​​the ​​playground ​​to ​​the ​​classroom. ​​ကလေးတွေက ​​ကစားကွင်းနဲ့ ​​စာသင်ခန်းကို ​​သွားလိုက် ​​လာလိုက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
‘Business ​​and ​​pleasure’ ​​လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ​​အပျော်အပါး
Business ​​ကတော့ ​​စီးပွားရေး ​​ဖြစ်ပြီး ​​pleasure ​​ကတော့ ​​ပျော်ရွှင်မှု ​​ဒါမှမဟုတ် ​​အပျော်အပါး ​​ဖြစ်ပါတယ်။
Business ​​and ​​pleasure ​​ကတော့ ​​အားလပ်ချိန်နဲ့ ​​စီးပွားရေး ​​လုပ်ငန်း ​​ပိုင်းကို ​​ရည်ညွှန်းတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​​- ​​At ​​our ​​company, ​​we ​​never ​​mix ​​business ​​and ​​pleasure.
ကျမတို့ ​​ကုမ္ပဏီမှာ ​​အလုပ်နဲ့ ​​အပျော်အပါးကို ​​ဘယ်တော့မှ ​​မရောဘူး။
Why ​​are ​​you ​​here ​​in ​​Australia, ​​business ​​or ​​pleasure?
သြစတြေးလျကို ​​ဘာကြောင့်ရောက်နေတာလဲ ​​အလုပ်သဘောလား ​​ဒါမှမဟုတ် ​​အပျော် ​​ခရီးပဲလား။
‘Cause ​​and ​​effect’ ​​အကြောင်းတရားနဲ့ ​​ရလဒ်
Cause ​​အကြောင်းတရား ​​ဖြစ်ပြီး ​​effect ​​ကတော့ ​​အကျိုးသက်ရောက်မှု ​​ဖြစ်ပါတယ်။
Cause ​​and ​​effect ​​တွေဟာ ​​လုပ်ဆောင်ချက် ​​ဒါမှမဟုတ် ​​အဖြစ်အပျက် ​​တို့အကြားမှာ ​​ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ​​ရလဒ် ​​ဖြစ်ပါတယ်။
The ​​cause ​​and ​​effect ​​relationship ​​between ​​studying ​​hard ​​and ​​academic ​​success ​​is ​​hard ​​to ​​ignore.
လေ့လာကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတဲ့ ​​အကြောင်းတရားနဲ့ ​​တက္ကသိုလ်ပညာ ​​အောင်မြင်မှု ​​ဆိုတဲ့ ​​အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့အကြားမှာ ​​ဆက်နွယ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ​​ဥပေက္ခာ ​​မပြုနိုင်ပါဘူး။
The ​​exam ​​question ​​asked ​​us ​​to ​​show ​​the ​​cause ​​and ​​effect ​​relationship ​​between ​​leaving ​​school ​​early ​​and ​​wealth.
ကျောင်းစောစောထွက်သွားတဲ့ ​​အကြောင်းတရားက ​​ချမ်းသာ ​​ကြွယ်ဝမှုအပေါ် ​​ဘယ်လို ​​သက်ရောက်မှု ​​ရှိသလဲ ​​ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ​​ပြောပြဖို့
စာမေးပွဲမေးခွန်းမှာ ​​ကျနော်/ကျမတို့ကို ​​မေးထားပါတယ်။